सभापतिको साझा उम्मेदवार छान्दा बाँकी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छः रामचन्द्र पौडेल (अन्तर्वार्ता) | Nepal Khabar
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध साझा उम्मेदवार तय गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। देउवाले पार्टी चलाउन नसक्ने सो समूहको ठहर छ। प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि सरकार विस्तार पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। यही सन्दर्भमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
तपाईंले भनेजस्तो अर्को कुनै व्यक्ति साझा उम्मेदवार बन्ने स्थिति आयो भने आगामी दिनमा कांग्रेसमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ?
त्यसो भए तपाईंको समूहको सम्भावित उम्मेदवार को?
पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ। आगामी मंसिरमै महाधिवेशन हुनेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ?
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखिएको छ। यो साँच्चैको विवाद हो कि तपाईंहरुले बखेडा झिकेको?
कांग्रेसले सरकारमा जान खासै रुचि देखाएको थिएन। गठबन्धनले जबर्जस्ती तानेर सरकारमा पुर्याएको हो?
किन विस्तार गर्न सक्नुभएन?
प्रधानमन्त्री देउवाले गर्न नसक्नुभएको कि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले गर्न नदिएको?
अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा पनि चर्चामा आएको छ नि?
प्रकाशित: October 03, 2021 | 21:16:51 असोज १७, २०७८, आइतबार